၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲကြီးမှာဘာတွေဝယ်သင့်လဲ? - Shop
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲကြီးမှာဘာတွေဝယ်သင့်လဲ?0727
11.11 shopping festival နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Single dayအဖြစ်လူသိများကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး online shopping ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alibaba ဟာအွန်လိုင်းမှ အကြီးစားအွန်လိုင်းရောင်းချမှုကို ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီ ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်‌ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီး ကို နိုဝင်ဘာလ ၁ မှ ၁၀ ရက်အတွင်းကို အကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၁ မှ ၁၇ ရက်နေ့တွေမှာတော့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီး ကို shop.com.mm မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေမှစတင်ပြီး ဖက်ရှင်ပစ္စည်းတွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအပြင် အခြား ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေ၊ လျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာ ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုဝယ်ယူသင့်လဲဆိုတာရောစဉ်းစားပြီးကြပြီလား?
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ခုလို အိမ်တွင်းအောင်းကာလမှာဆိုရင် အိမ်မှာနေရင်း အပန်းဖြေလို့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ Netflix၊ Spotify၊ Apple Gift Card၊ Steam Walletစတဲ့ Digital Goods တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Digital Goods တွေနဲ့ အချိန်တွေကုန်ဆုံးဖို့ဆိုရင် အဆာပြေ စားသောက်ကုန်တွေကိုလဲ ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အခုဆိုရင် မိုးအကုန်ဆောင်းအကူးကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်‌‌‌‌‌ ဖက်ရှင်အသစ်တွေကို ဝယ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ Shop.com.mm မှာဆိုရင်ဖက်ရှင်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကိုတစ်နေရာထဲမှာရနိုင်ပြီး ခုဆိုရင် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးလဲလာတော့မှာဆိုတော့ မိမိဖက်ရှင်တွေကို အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ အလွယ်တကူဝယ်ယူဖို့ခက်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကိုပါဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါ။
ကဲ နောက်ထပ်ဝယ်ယူသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ပျိုမဒီလေးတို့အတွက် အသားအရေလေးတွေကိုဝင်းပချောမွှေ့စေမည့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုကာလနဲ့လဲလိုက်ဖက်ပြီးတော့ အထူးလျှော့စျေးတွေ သက်သာတဲ့ စျေးနှုန်းတွေနဲ့ပါဝယ်ယူမှာဆိုတော့ ပျိုမေလေးတွေအကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် မိန်းကလေးတွေအတွက် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေသာမက ယောကျာ်းလေးတွေအတွက်လဲ Facial foam တွေ Toner တွေစတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာလဲပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ပျိုမေတွေနဲ့အပြိုင် ချောမောစေဖို့ ကိုကိုတို့လည်း လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို Wishlist ထဲထည့်ထားလိုက်တော့နော်။
ဒီလို လျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင် ယောကျာ်းလေးတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှား စေဆုံးနဲ့ ဝယ်ယူ ချင်ဆုံးပစ္စည်းတွေဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Gaming Gadget တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ပုံမှန်စျေးနှုန်းထက် သက်သာတဲ့စျေးနှုန်းတွေအပြင် လျှော့စျေးကူပွန်တွေနဲ့ပါဝယ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းပေါင်းများစွာနဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာကိုတစ်နေရာထဲရရှိနိုင်ပြီး အပြင်လဲမထွက်ရပဲ အိမ်မှာနေရင်း ဝယ်ယူလို့ရတာဆိုတော့ အိမ်တွင်း အောင်းနေရတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးပါပဲ။
ဒါတွေအပြင် ဒီ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘ့ာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲကြီးမှာ အခြားပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက် Shop Appကို Download ပြုလုပ်၍ Register လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါ လိမ့်မယ်။
Previous ArticleShop bring back the world’s biggest sale 11.11 to MyanmarNext ArticleWhat should you buy in 11.11 Biggest Sale 2020?